Setimadi Dainikके दिपक मनाङगेहरु मात्रै डन हुन ? - Setimadi Dainik
के दिपक मनाङगेहरु मात्रै डन हुन ?
अपराध दुनियाँका नाइके दिपक मनाङगे आज थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश सगै मनाङगे थुनामुक्त भएका हुन । मनाङगे थुनामुक्त भएका समाचार अधिकांश रेडियो ,टेलिभिजन र अनलाइन प्रकाशित भईरहेका छन् । मनाङगे थुनामुक्त भएको समाचार भोलि प्रकाशित हुने अखबारहरुले समेत निश्चित रुपमा प्रकाशित गर्नेछ । आज जति पनि सञ्चार माध्यममा मनाङगे सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएका छन् । ति समाचारहरुमा दिपक मनाङगेलाई डनको पगरी गुथाईएको छ ।सम्भवतः भोली प्रकाशित अखबारहरुले समेत मनाङगे थुनामुक्त भएको समाचार प्रकाशित गर्दा डनको उपाधि नै दिनेछन् ।
सायद, मनाङगे आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति भएकोले गर्दा सञ्चार माध्यमहरुले मनाङगे थुनामुक्त भएको समाचार प्रकाशित गर्दा डन शब्द प्रयोग गरेको हुनु पर्दछ । एक हिसाबले सञ्चार माध्यमले चयन गरेको उक्त शब्द सहि छ । तर नेपालमा सञ्चार माध्यममा होस या प्रचलनमा डन शब्दलाई जुन हिसाबले प्रयोग गरिदै आएको छ । त्यो सरासर गलत छ । त्यसलाई सच्याईनु जरुरी छ । किनकि डन शब्दको अर्थ कुनै संगठित आपराधिक समूहको नाईके भन्ने मात्र हो भन्ने हुैदन । डन शब्दको अर्थ राम्रा पनि रहेका छन् । ति मध्ये केही अर्थ यसप्रकार रहेका छन ।
don–A Spanish title of respect foragentle man or nobleman (स्पेनिशहरुले कुनै असल वा भद्र व्यक्तिलाई दिएको उपाधि )
don_teacher atauniversity of collage (especially at Cambridge or oxford) (विश्व विद्यालयहरुमा प्राध्यापकहरुलाई दिइने उपाधि ,त्यसमा पनि क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड विश्व विश्व विद्यालयहरुमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरु )
don–Celtic goddess( देवी देवताको दूत )
त्यस्तै डनको अर्को शाब्दिक अर्थ खोज्ने हो भने विश्व विद्यालयहरुमा प्राध्यापकहरुलाई दिइने उपाधि (त्यसमा पनि क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड विश्व विश्व विद्यालयहरुमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरु )लाई भन्ने बुझिन्छ । यि लगायत थुप्रै परिभाषा छन् डन शब्दको ।
डन शब्दको यति धरै सकारात्मक अर्थ हुँदा हुँदै पनि नेपाली समाज त्यसमा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले किन गलत ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । यो अत्यन्त गम्भिर विषय बन्न थालेको छ । खासगरी नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने डन भने पछि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु नै हुन भन्ने छाप परेको छ । यो छापले नेपाली समाजमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । त्यसैले डन शब्द प्रति बढ्दै गईरहेको नकारात्मक सन्देशलाई हटाउन पनि अब सञ्चार माध्यम र समाजले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने ठाउँमा डन शब्दको प्रयोग गर्दा उचित हुने थियो कि ?
दिपक मनाङगेकै हकमा भन्ने हो भने उनलाई डन भन्नुको सट्टा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका मनाङगे थुनामुक्त , प्रदेश सभामा सपथ ग्रहण बञ्चित मनाङगे थुनामुक्त लगायतका शिर्षक राखेर समाचार सञ्चार माध्यमले प्रकाशित एवं प्रशारण गर्न सक्ने ठाउँ रहेको छ ।तर त्यस तर्फ सञ्चार माध्यमहरुको किन ध्यान पुग्न सकिराखेको छैन ।त्यो यतिखेर निकै वहसको विषय बन्न पुगिरहेको छ ।
नेपालको हकमा हेर्ने हो भने शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिए । उनले छरेको शान्तिको सन्देश आज सारा विश्व भरि फैलिएको छ । साच्चै भन्ने हो भने उनी नेपालका मात्र होइन सारा विश्वका शान्तिका डन हुन् । त्यस्तै एडमण्ड हिलारी सगै संसारको अग्लो चुचुरो सगरमाथामा पहिलो पटक पाइला टेके नेपालकै तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा। उनी पनि नेपालको मात्र नभई सारा विश्वकै डन हुन ।तर विश्व चिनाउने ति डनहरुको राज्यले पहिचान गर्न सकेको छैन । सायद, स्पेनमा जन्मिएका हुँदा हुन त जेष्ठ नागरिक भत्ताका परिकल्पनाकार एवं गाउँसेवा कोषका संस्थापक भिमबहादुर अधिकारीलाई स्पेनिश समाजले डनको उपाधि दिने थियो । तनहुँको मिर्लुङमा जन्मिएका अधिकारी डनको उपाधि पाउनबाट बञ्चित भईरहेका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्व विद्यालयको सट्टा क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड विद्यालयमा पठाएको भए अभि सुवेदीहरुले पनि डनको उपाधि पाइसकेका हुने थिए ।तर दुरभाग्य ,यतिखेर नेपाली समाज र नेपाली सञ्चार माध्यमले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका मनाङगेहरुलाई मात्र डनको उपाधि दिई रहेको छ ।